Anyị ServiMatango C.A. = Ọrụ Matango
Servimatango C.A. na-a ụlọ ọrụ raara onwe ha nye-enyere ndị mmadụ na ulo ike na ịzụlite ọrụ ha online.
Anyị bụ ndị a na ụlọ ọrụ na-azụmahịa site internet na n'isi ụlọ ọrụ n'obodo Ibarra-Imbabura-Ecuador. Na-elekwasị anya ya na-eme na-enye mgbazinye ozi raara sava maka VoIP, Bochum, ngalaba na ndị ọzọ na dijitalụ ngwọta n'ihi na onye ọrụ na-eji Web.
Anyị na-eguzo anyị na mba asọmpi site n'itinyekwu otutu atụmatụ mgbanwe na ihe ọrụ, jikọtara na mgbasa ozi, otu ìgwè ndị pụrụ iche na-arụ ọrụ, anyị magburu onwe ìgwè nke rụkọrọ ọrụ, ọkachamara oru nkwado na elu àgwà ọrụ n'ihi na ndị ahịa anyị.
Anyị na-enye ndị ahịa anyị ohere ike na ịzụlite ọma ulo oru na-eme ka uto akụ na ụba site ndokwa nke mba Internet ọrụ ezigbo nkà na ụzụ àgwà, kụziri site kasị mma ọkachamara na ụwa.
Dịkwuo ugwu na mba ude ka ndokwa nke elu àgwà ọrụ, na-ebute ụzọ akụrụngwa na ama ihe nke ọma na ọrụ na ọzụzụ nke mmadụ talent.
Ụfọdụ oge gara aga na nke ógbè Imbabura; ukwu abụọ ọhụụ Franklin na Nelly kpebiri na-aga n'ihi oké echiche: "Na-egosi na Ibarra-Ecuador nwere ike ime ihe ukwu".
Na otú malitere ha ụzọ ịga nke ọma: mmejuputa na 2008, ọrụ mgbazinye / mgbazinye ServerVoip.com sava; enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite ha onwe ha azụmahịa Internet Telephony (VoIP) na n'aka na Alosip.com, inye nkeji maka oku n'elu internet.
N'ihi na aka iso uto nke ọrụ ndị a, kpebiri etolite ụlọ ọrụ ya na iwu aha aha: Matango Ọrụ Company Limited “ServiMatango C.A”.
Malitere arụmọrụ ke 2012 na ebumnuche nke na-enye multiple ọrụ ndị mmadụ na ulo oru, ya mere ha nwere ike ịmepụta na ịzụlite ha onwe ha internet azụmahịa n'ebe ọ bụla n'ụwa. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na, renting sava na VoipSwitch n'elu ikpo okwu na mejuputa Internet ọkpụkpọ ozi, Ọ bụ onye nkwado nke ụlọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ Ụkpụrụ
Iguzosi ike n'ihe
Eguzosi ike n'ezi ihe
Healthy-arụ ọrụ Environment
M, Franklin cucumbers:
“M chọrọ igosi na m compatriots, na-aga nke ọma ná ndụ na-adịghị mkpa iga njem mba ndị ọzọ. Ebe a na Ecuador ma ọ bụ na mba ebe ha na-ebi na mbanye, ọmụmụ, mkpebi siri ike na ịnụ ọkụ n'obi; na ndị na otu ọchịchọ na ị na-mgbe ị na-n'èzí gị na ị nwere ike nweta ihe ukwu”.
S Na ServiMatango.com: Anyị na ezute Team
Anyị bụ ndị a otu nke ukwuu zụọ ha na specialized ọkachamara na iche iche ebe: technology, software, mmepe, ahịa, e-ahịa, imewe, oru nkwado na ahịa ọrụ ndị dị mkpa ihe ọmụma izute ozi arịrịọ.
Nye keukwu ndụmọdụ, bụ kwukwara uru na-eme ka anyị na ndị ahịa-anọgide na-ahọrọ anyị.
Marketing na Ahịa
Ndewo m Franklin Matango, M jikọrọ aka ServiMatango na ịrara onwe m nye enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite azụmahịa online.
“M na-enye keukwu ndụmọdụ ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ na-eke na-emepe emepe internet azụmahịa”.
Hi m Nelly Matango, M jikọrọ aka ServiMatango na ịrara onwe m nye enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite azụmahịa online.
“M jikwaa na m ịchịkwa onwunwe dị mkpa maka kwesịrị ekwesị ịrụ ọrụ nke internet azụmahịa”.
Hi m Andrea Maldonado, M jikọrọ aka ServiMatango na ịrara onwe m nye enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite azụmahịa online.
Hi m Fernando Molina, M jikọrọ aka ServiMatango na ịrara onwe m nye enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite azụmahịa online.
“Nyere oru consultancy specializing ke internet azụmahịa”.
Ndewo m Jessenian Tequiz, M jikọrọ aka ServiMatango na ịrara onwe m nye enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite azụmahịa online.
“Zụlite ihe echiche online azụmahịa”.
Hi m Angel Cedeño, M jikọrọ aka ServiMatango na ịrara onwe m nye enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite azụmahịa online.
“Development Software ka machiini azụmahịa Filiks online”.
Anyị Ọrụ: pịa ebe a